Shallagi - LibreOffice Help
Wardiileedhaaf qindaa'inoota shallaggii qindeessa. Amaloota wardiilee wabiilee deddeebi'oodhaan, qindaa'inoota guyyaatiin, iddoowwan deesiimaaliitiin, akkasumas yoo guddaan jalqabuu yookiin qubeeleen xixiqqaa yeroo wardiilee keessa barbaadan ilaalcha keessa galan qindeessa.
Open a spreadsheet document, choose Tools - Options' - LibreOffice Calc - Calculate'
1 Wabiilee deddeebi'oo
1.3 Jijjiirama xiqqaa
2.1 12/30/1899 (durtii)
4 Sirrummaa akka mul'atutti
5 Ulaagaan barbaachaa = fi <> maadheelee guutuuf raawwachuu qaba
7 Himannaa sirraawaa foormulaawwan keessatti dandeessisi
9 Ufmaan asxaalee sarjaa fi tarree barbaadi
10 Limit decimals for general number format
11 Iddoowwan deesiimaalii
Kutaa kana keessatti lakkoofsa tilmaama tartiibaalee yeroo shallaggii deddeebi'oo raawwatan daangessuu dandeesa. Dabalaanis, sadarkaa sirrummaa deebii ifteessuu dandeessa.
Akka foormulaawwan wabiilee deddeebii waliinii (foormulaa hanga rakkoon hiikamutti hanga dhumaatti deddeebi'an) deddeebii muraasaan booda shallagamu ifteessa. Yoo sanduuqni Deddeebii mallattaa'uu baate, wabiin deddeebii gabatee keessaa ergaa dogoggoraa uuma.
Fakkeenyaaf: Gatii waantaa ashuuraa dabalataa malee shallaguu.
Barruu 'Gatii gurgurtaa' maadhee A5 keessatti, barruu 'Net' maadhee A6 keessatti, fi barruu 'shuuraa gatii dabalataa' maadhee A7 keessatti barreessi.
Amma gatii gurgurtaa (fakkeenyaaf, 100) maadhee B5 keessatti barreessi. Gatiin dhumaa maadhee B6 keessatti mul'achuu qaba akkasumas gatiin dabalata ashuuraa B7 keessatti mul'achuu qaba.
Gatiin dabalata ashuura akka 'gatii dhumaa si'a 15%' dhaan shallagamuu fi akka gatii gurgurtaa irraa gatii dabalata ashuura hir'isuun gatii dhumaa argattu beekta. Foormulaa =B5-B7 B6 keessatti gatii dhumaa shallaguuf barreessi, akkasumas Foormulaa =B6*0.15 B7 keessatti gatii dabalata ashuuraa shallaguuf barreessi.
Foormulaawwan sirriidhaan shallaguuf deddeebii bani, yoo ta'uu baate ergaa dogoggoraa 'Hirkoo gamhundaa' kabala Haala keessatti mil'ata.
5 Gatii gurgurtaa 100
6 Dhuma =B5-B7
7 Ashuuraa =B6*0,15
Lakkoofsa tartiiba deddeebii fiixee qindeessa.
Garaagarummaa bu'aalee tartiiba deddeebii lama walitti aanan ifteessa . Yoo bu'aan deddeebii gatii jijjiirama xiqqaa irra gadaanaa ta'e, deddeebiin sun achumaan dhaabbata.
Jijjiirraa keessaa guyyoota irraa gara lakkoofsotaatiif guyyaa jalqabaa filadhu.
12/30/1899 akka duwwaatti kaa'a.
1/1/1900 akka duwwaatti kaa'a. Wardiilee StarCalc 1.0 galfatoota guyyaa qabataniif qindaa'ina kana fayyadami.
1/1/1904 akka duwwaatti kaa'a. Wardiilee gita alaatiin alaa galaniif qindaa'ina kana fayyadami.
Akka qubee guddaa fi xiqqaa yeroo qabiyyeewwan maadhee waldorgomsiistu barruu keessatti addaan baastu ifteessa.
Fakkeenya: Maadhee A1 keessatti barruu 'yaalii' barreessi; akkasumas barruu 'yaalii' B1 keessattis. Achiin foormulaa "=A1=B1" maadhee C1 keessatti barreessi. Yoo sanduuqni qub-suukana mallattaa'e, SOBA maadhee keessatti mul'ata; yoo ta'uu baate, DHUGAA maadhee keessatti mul'ata.
Dalagaan sirrii barruu hoggayyuu qindaa'inoota gongee dhaamsaa kana alatti qub-suukannaa dha.
Sirrummaa akka mul'atutti
Akka shallaggii gatiilee sissiqanii wardii keessatti mul'atanitti fayyadamuun hojjettu ifteessa. Taattoowwan gatii agarsiifamaniin mul'atu. Yoo dirqaalli Sirrummaa akka mul'atutti mallattaa'uu baate, lakkoofsi mul'atan ni sissiqu, haa ta'u malee keessatti akka lakkoofsa lakkoofsa hin sissiqiniin fayyadamuun shallagmu.
Ulaagaan barbaachaa = fi <> maadheelee guutuuf raawwachuu qaba
Akka ulaagaan barbaachaa dalagaalee kuusaa deetaa Calc keesse maadhee guutuu sirrumaan simu ifteessa. Yeroo sanduuqni Ulaagaan barbaachaa = fi <> maadheelee guutuuf raawwachuu qaba mallattaa'u, LibreOffice Calc yeroo maadheelee dalagaalee kuusaa deetaa keessa barbaadu amala sirrumaan MS Excel wajjin walfakkaatu agarsiisa.
.* qubannoo armaan gadii keessatti:
win win, garuu win95 miti, 0s2win, yookiin upwind barbaada
win.* win, garuu win95 miti, 0s2win, yookiin upwind barbaada
.*win win fi os2win, garuu win95 yookiin upwind miti barbaada
win.* win, win95, os2win, fi upwind barbaada
Yoo Ulaagaan barbaachaa = fi <> maadheelee guutuuf raawwachuu qabadandeessifamuu baate, sarxaan barbaacha "win" akka ".*win.*" tti hojjeta. Sarxaan barbaacha yeroo dalagaalee kuusaa deetaa Calc dhaan barbaadnu maadheelee keessatti qubannoo kamiyyuu qabaachuu danda'a.
Himannaa sirraawaa foormulaawwan keessatti dandeessisi
Ufmaan asxaalee sarjaa fi tarree barbaadi
Akka barruu maadhee kamiiyyuu keessa jiru akka asxaa sarjaa barruu jalaatti yookiin tarree mirga barruutti fayyadamuu dandeessu ifteessa. Barruun yoo xiqqaate jecha tokkoo qabaachuu fi ogeejjii kamiyyuu qabaachuu dhiisuu qaba.
Fakkeenya: Maadheen E5 barruu "Europe" qabata. Gaditti, maadhee E6 keessatti, gatii 100 tu jira akkasumas maadhee E7 keessa gatii 200 tu jira. Yoo sanduuqni Ufmaan asxaalee sarjaa fi tarree barbaadi mallattaa'e, foormulaa armaan gadii maadhee A1: =SUM(Europe) keessatti barreessuu dandeessa.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Common/Calculate/om&oldid=1333895"
This page was last edited 18:30:23, 2016-06-18 by LibreOffice Help user .